Zeziphi ezona ziCwangciso zokuSebenza ziPhembelelayo? | Martech Zone
Zeziphi ezona ziCwangciso zokuSebenza ziPhembelelayo?
NgoLwesine, Novemba 9, 2017 NgoMvulo, nge-18 kaJanuwari, 2021 Douglas Karr
UBrian Wallace wabelane nge Imbali, i-Evolution, kunye neKamva lokuThengisa lowo wenze umsebenzi omnandi wokuchaza ifuthe kunye nendlela ii-brand ezinxibelelana ngayo. Ndithethile kakhulu malunga nendlela ii-brand ezisebenza ngayo nabashukumisayo kwaye ngokuchaseneyo kwaye ndiyakholelwa ukuba le infographic evela kwiNtengiso ye-MDG yenza umsebenzi obalaseleyo ekuboniseni ukuba ubudlelwane bempembelelo yempembelelo bujongeka kanjani.
I-infographic, URhulumente weNtengiso oPhembelelayo: Yeyiphi na into ekufuneka eyiNtengiso yeBrand, ixoxa ngezona ndlela zisebenzayo kunye neendlela zokuphembelela ukuthengisa.
Uninzi lweeTactics eziSebenzayo zeNtengiso
https://martech.zone/neverbounce-referralOonozakuzaku abaqhubekayo - okwangoku, ndinobameli obuqhubekayo kunye I-Agorapulse. Inokuba lolunye lolwalamano oluhle endakha ndalwenza kunye nophawu. Ndenza ubudlelwane noAgorapulse emva kokuba ndikhathazekile ngamanye amaqonga eendaba ezentlalo xa ndiphatha uninzi lweeakhawunti zosasazo. Ujongano lomsebenzisi lusebenza kakhulu njengoluhlu lomsebenzi okanye i-inbox, apho amaqela akho anokulawula ngokulula unxibelelwano lwangaphandle. Indibaniselwano yokufikelela kwam kunye nothando endinalo ngemveliso yabo luvule ucango apho uEmeric neqela lakhe bandisayinela inkqubo ye-Ambassador. Ngaphandle koxinzelelo, kunye nokubhengezwa ngokupheleleyo, ndithetha ngeAgorapulse xa abantu befuna iqonga lokulawula imithombo yeendaba zabo.
Uphengululo lweMveliso- uShure undithumele i MV88 Imakrofoni ye-iPhone yam malunga nonyaka odlulileyo ukuvavanya. Ukulindelwa kukuba ndiza kwabelana ngohlaziyo lwam kwi-Intanethi emva koko ndibuyisele imakrofoni. U-Shure waqonda ukuba banemveliso emnandi kwaye bafuna ukuthengisa ngee-podcasters ngefuthe. Ewe, ndiyithandile imakrofoni ngokunzulu kangangokuba ndiyaqhubeka ukuyibonisa wonke umntu… kwaye ndacela uShure ukuba ndingayigcina.
Iimpawu zomkhiqizo - Ungaze uyekelele yinkampani enceda amashishini agcine isiseko sedatha se-imeyile sicacile kwiidilesi ezinengxaki ezinokuba nefuthe elibi kubuchule babo bokungena kwi-inbox yababhalisi babo. Ndinenqaku, Kutheni, Njani, kwaye phi ukuNgqinisisa uLuhlu lweeMeyile zakho kwi-Intanethi, ezifundwa ngokungaguquguqukiyo ngabafundi ngeenjongo zokujonga izisombululo ezinje ngeNeverbounce ifikelele. Emva kokuvavanya iqonga labo kunye nabanye, bendisazi ukuba banemveliso elungileyo phaya, ndaye ndamkela isithembiso sokubonisa ngokucacileyo inkonzo yabo kweso sithuba. Ewe, kunjalo, sikwabonisa ukubhengezwa ngokupheleleyo.
Umnyhadala woMsitho -Upapasho lwethu kunye nesitudiyo sethu esiphathwayo, ndihlala ndicelwa ukuba ndigubungele imicimbi ukuze ndihlawule, ndihambe, kunye neendleko kwimisitho. Kumsitho, sipapasha amanqaku, irekhoda ii-podcast, senza iiseshoni zika-Facebook eziBukhoma, kwaye siphile-kwi-titter iminyhadala. Ndikhe ndazisa abasebenzi ukuba bavelise iincwadana ezinemifanekiso zokuthumela iposi ekhaya kunye nababekho emva kweziganeko. Kutshanje, ndiyenzile le nto kwiDell World apho ndadibana noMark Schaefer kwiiLuminaries podcast yabo. Umnyhadala kunye nethuba. Ngaphandle kokunyuka eqongeni, le yeyona ndlela ndiyithandayo yokufumana inkomfa!
Okuxhaswayo Ngelixa ndingakhathali ngesiqulatho esixhasiweyo, ngokwenene ndikhethe iinkampani ezineqabane. Ngokwenene kufuneka babe ziinkokeli kwicandelo labo lentengiso kwaye babonelele ngexabiso kubafundi bethu, kubaphulaphuli nakubalandeli. Ukuba ibeka uphawu lwam emngciphekweni, andizukuyenza. Ndijike itoni yeenkampani ezantsi kule minyaka ngenxa yokuba andikwazi ukungqinisisa inkampani okanye imveliso. Uya kuhlala ufumana umxholo oxhasiweyo ngendlela ye imisitho yentengiso esabelana ngayo.
Abathengisi bathi owona mxholo osebenzayo uvela kubantu abanokuthenjwa, abanamava. Ewe ndiyavuma noku. Ndiyakholelwa ukuba, abathembekileyo abanamava bachitha iminyaka, mhlawumbi amashumi eminyaka, besakha igunya labo kwishishini labo. Ngotyalomali olunje, ngekhe babeke nje ngaphandle kwintengiso kwelona bhidi liphezulu. Ndiqinisekile ukuba ndingayiphinda kabini okanye ndiyiphindaphinde kathathu ingeniso yam yentengiso, kodwa andiyi kuyenza ngeendleko zokuphulukana nentlonipho ngabafundi bam. Into endiyibhatalelwa luphawu ayithelekisi nomzamo endiwuthathe ukwakha ukuthembeka kwam, kwaye andizukubeka esichengeni.
Umbuso weNtengiso yeFluencer: Yeyiphi na into ekufuneka iBrand ifuna ukuyazi
tags: ukuthengisa okunempembeleloimpembelelo yentengiso infographickwi-infographicmdg intengisomdgokwazisaimeko yentengiso enefuthe
I-Adobe Creative Cloud: Funda uPrinta oLungileyo kwiiLayisensi!
Ngokwenyani abantu bafanele baziphathe ngcono kwiMithombo yeendaba